जातिवादी सोचबिरुद्ध सशक्त सिर्जना : थर बदल्नु पर्दैन, सोच बदले पुग्छ - Dainik Online Dainik Online
जातिवादी सोचबिरुद्ध सशक्त सिर्जना : थर बदल्नु पर्दैन, सोच बदले पुग्छ
प्रकाशित मिति : १० असार २०७७, बुधबार ७ : २१
जातीय विभेद र छुवाछूतको कुप्रथाले सिर्जना गरिदिएको कथित उच्च जातिको अहङ्कारका कारण रुकुमको चौरजहारीमा घटेको बर्बर युगको झल्को दिने नरसंहारकारी घटनाको सचेतजनहरुबाट चौतर्फी तीव्र विरोध हुँदै आएको छ । उक्त घटनाबारे प्रतिनिधिसभामा समेत जोडदार आवाज उठ्यो । रुकुम चौरजहारीको नरसंहारकारी घटनाबारे २०७७ जेठ १८ गते प्रतिनिधिसभामा बोल्दै जनता समाजबादी पार्टीका नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले भन्नुभएको थियो, ‘मेरो एउटा प्रस्ताव छ छलफलका निम्ति । तपाईंहामी सबैले दलित नाम राख्दिम न । बाबुराम भट्टराई कामी भन्न किन नहुने ?…।’
डा. भट्टराईको उक्त अभिव्यक्तिलाई लिएर सञ्चारजगतमा तीब्र टिप्पणीहरु उठिरहेका छन्, के जातीय विभेद र छुवाछूतको यो पर्खाल कथित उच्च जातिका मानिसहरुले आफ्नो थर बदल्दैमा मेटिन्छ त ? लोकगायक हेमन्त कान्छा रसाइलीको ‘थर बदल्नु पर्दैन’ बोलको नयाँ गीत त्यही प्रश्नको उत्तर लिएर आएको छ ।
रगत सबैको रातै हो सेतो हुने कुन छ
बाहुन दाइलाई बाहुन भन कामी दाइलाई कामी भन
थर बदल्नु पर्दैन, सोच बदले हुन्छ
थर बदल्नु पर्दैन पानी चले पुग्छ…
हो, वास्तवमा हामीले बदल्नुपर्ने भनेको समाजमा जरा गाडेर बसेको कुविचारको पिछडिएको सोच हो । छुवाछूतको कुप्रथाले हाम्रो समाजमा यति गहिरोसङ्ग जरा गाडेको छ कि हामी मुखले त जातीय समानताको कुरा गर्छौं तर ब्यवहारमा मुखले बोलेको त्यो बोलीलाई उतार्न चुकिरहेका हुन्छौं । हामीभित्र छिपेर बसेको जातीय अहङ्कारको सोंच विभिन्न रुपमा प्रकट भइरहेको हुन्छ । सामन्तवादी संस्कार र कुरीतिले हाम्रो भित्री मनमा पारेको प्रभावबाट हाम्रो त्यो व्यवहार निर्देशित भइरहेको हुन्छ । हामी धेरैले त्यसको पत्तो पाउन सक्दैनौं । हामीले बदल्नुपर्ने भनेकै त्यही भित्री सोंच हो । थर बदलेर लेख्दैमा सामन्तवादी कुविचारको जालोले बेरिएको त्यो भित्री चिन्तन बदलिँदैन । हामीले बदल्नुपर्ने भनेकै त्यही भित्री चिन्तन हो । हामीले मुखले जातीय समानताको जुन कुरा गरिरहेका हुन्छौं हाम्रो व्यवहारमा त्यो प्रष्टिन सक्नुपर्दछ । ‘थर बदल्नु पर्दैन’ गीतले त्यही भाव बोकेको देखिन्छ: मुखले होइन ब्यवहारमा नि लिनसक्नु पर्यो
ठकुरीको छोरी कामीलाई दिन सक्नु पर्यो
मन्दिरमा सबको हातको दियो जल्नुपर्छ
तिर्खा लाग्दा एकअर्कामा पानी चल्नुपर्छ
रगत सबको रातै…
हाम्रो बोली र ब्यवहारबीचको गहिरो खाडल नै जातीय समानताको लडाइँमा अहिले मुख्य बाधा बनेर उभिइरहेको छ । कम्युनिस्टहरु साम्यवादी समाजका प्रवर्तक हुन् । जातीय समानताका पक्षपाती हुन् । वैज्ञानिक भौतिकवादी विचारलाई आत्मसात गरेका सचेत मानिसहरु हुन् । सम्पूर्ण ब्यक्तिगत लोभलालच, महत्वाकांक्षा र कुविचारबाट मुक्त भएपछि नै एउटा व्यक्ति कम्युनिस्ट भएको मानिन्छ । तर आफूलाई कम्युनिष्ट बताउने कतिपय मानिसहरु वास्तबमा कम्युनिष्ट बन्न नसकेको उसको व्यवहारले प्रष्ट पारिरहेको हुन्छ । भाषणमा, प्रशिक्षणहरुमा, लेखरचनाहरुमा उच्च क्रान्तिकारी भाव घन्काउनेहरु नै व्यवहारमा पुरातन विचार र संस्कारबाट अझै मुक्त हुन नसकेका प्रशस्त उदाहरणहरु पाइन्छ । आफूलाई कम्युनिष्ट बताउने उच्च तहका नेताले सामन्तको नाइकेलाइ विष्णुको अवतार मानेर ‘पाउमा दाम चढाएको’, ग्रहदशा कटाउनका लागि ‘भैंसीपूजा’ समेत गरेको, बिहेपछि पहिलोचोटी ससुराली जाँदा ‘खसी डोराउँदै’ गएको, यस्ता कैयौं घटनाहरु हामीले देखेका सुनेका छौं । भौतिकवादी कतिपय कम्युनिष्ट नेताहरुका घरहरुमा अहिले पनि देवीदेउताको तस्विर र मूर्तिहरुले सजिएका पूजाकोठाहरु देख्न सकिन्छ ।
रुकुम चौरजहारीको त्यही नरसंहारकारी घटना घटेको क्षेत्र कुनै बेला माओवादी सशस्त्र विद्रोहको आधार इलाका थियो । त्यहाँ युद्धकालमा माओवादीको आफ्नै स्थानीय सत्ता चलेको थियो । अहिले पनि स्थानीय सरकार त्यहाँ सरकारी नेकपाले नै चलाइरहेको छ । तर पनि त्यहाँका जनताको पुरातनवादी सोच बदलिएको रहेनछ भन्ने कुरा अहिलेको घटनाबाट प्रष्ट भयो । त्यहाँका कथित उच्च जातिमा रहेको जातीय अहङ्कारवादी सोच नै त्यस्तो बर्बरतापूर्ण नरसंहारकारी घटनाको मुख्य कारक थियो । त्यसैले यो पुरानो सोचलाई बदल्ने काम निकै जटिल र कठिन छ । तर त्यो कठिन काम पूरा नगरी हामीले समतामूलक सभ्य समाजको निर्माण गर्न सक्दैनौं । पुरातनवादी सोच, विचार र व्यवहारलाई बदल्नका लागि जनतामा समतामूलक चेतना जागृत गराउन हामीले लगाताररुपमा साँस्कृतिक क्रान्ति चलाइराख्नु पर्दछ । समाज बदल्न तम्सनेहरु सर्वप्रथम आफू बदलिन सक्नु पर्दछ । उनीहरुको जीवनशैली र व्यवहार बदलिएको हुनु पर्दछ । ‘जात बदल्नु पर्दैन’ गीतले सभ्य र समतामूलक समाज निर्माणका लागि समाजका अगुवाहरुले आफ्नो व्यवहारमा सर्वप्रथम परिवर्तन गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिएको छ । गीतका शब्दहरुमा सपना रसाइली लेख्नुहुन्छ :
दमाई दाइले लुगा सिलाई शरीर छेक्नुपर्ने
तिनै दाइले छुँदा किन सुनपानीले छर्ने
दलित कोटा होइन अब गरिब कोटा बनाउ
सानो ठूलो जात हुँदैन व्यवहारबाट जनाउ
छुवाछूत र जातीयताको यो पर्खाल वास्तबमा समाजका हुनेखाने सामन्ती वर्गले दीनदुःखी गरिबहरुलाई एकजुट हुन नदिन, आफ्नो लुटको स्वर्गलाई बचाइराख्न खडा गरेको पर्खाल हो । यो जात ठूलो त्यो जात सानो वास्तबमा पहिलेका शासकहरुले आफ्नो शोषण सत्तालाई जोगाइराख्न बसालेको थिति मात्र हो । जुनसुकै जातभित्र पनि शोषक र शोषित वर्ग रहेको हुन्छ । जुनसुकै जातको भए पनि शोषकहरुको स्वार्थ मिलेको हुन्छ । उनीहरु मिलेरै दीनदुःखी गरिबहरुलाई लुटिरहेका हुन्छन् । त्यो शोषणको विरुद्धमा जुध्न पनि श्रम गरेर जीविकोपार्जन गर्ने श्रमजीवी वर्गहरु एकजुट हुनु पर्दछ । त्यसरी सबै जातभित्रका गरिब दीनदुःखीहरु एकजुट भएर अगाडि बढियो भने मात्र हाम्रो लडाइँ बलियो हुनेछ र त्यो आन्दोलनका अगाडि शोषक ठालुहरु झुक्न बाध्य हुनेछ्न । समाजमा जातीय असमानताको जुन रेखा कोरिएको छ, त्यसलाई पूर्णरुपमा मेटाउन सक्ने भनेको वर्गीय आन्दोलनले नै हो । त्यसैले हामीले यो जातीय विभेद र छुवाछुतबिरुद्धको आन्दोलनलाई पनि वर्गीय मुक्ति आन्दोलनसङ्गै जोडेर अगाडि बढाउनु पर्दछ । त्यसरी अघि बढे मात्र हामीले त्यो आन्दोलनलाई सही निष्कर्षमा पुराउन सक्नेछौं ।
लोकगायक हेमन्त कान्छा र सर्जक सपना रसाइलीसङ्ग मेरो कुनै व्यक्तिगत चिनजान छैन । उहाँहरुलाई जति चिनिएको छ, यस्तै गीतहरुमा नै चिनिएको छ । तर उहाँहरुले ल्याउनु भएको गीत ‘थर बदल्नु पर्दैन’ले जातीय समानताको पक्षमा दरिलो आवाज उठाएको पाएर नै यो समीक्षा कोर्ने जमर्को गरेको हुँ । गीतमा हेमन्तलाई साथ वरिष्ठ लोकगायिका देवी घर्तीले दिनुभएको छ । सङ्गीत, सङ्गीत संयोजन र भिडियो निर्देशन समेत हेमन्त कान्छाकै रहेको यस गीतको सम्पादन मनोज कार्कीले गर्नुभएको छ । हेमन्तकै युट्युब च्यानलबाट २०७७ जेठ ३० मा सार्वजनिक भएको यस गीतमा सुरवीर पण्डित, अञ्जु निरौला, हेमन्त कान्छा, रविना भण्डारी, चक्र साउद आरसी, दीपा गुरुङ, देवेन्द्र भण्डारी, रविना गुरुङ, दीपककुमार गुरुङ, भरत गोराथोकी, पदम भण्डारी, छेस्याङ तामाङ, लालकुमार घले, शिव धिमाल, रोशन भुसाल, सलिना बुढाथोकी, राजु लामा, सन्तोष बुढाथोकी लगायत झण्डै दुई दर्जन कलाकारहरुको अभिनय रहेको छ । सुरवीर पण्डित, अञ्जु निरौला र हेमन्त कान्छाको अभिनय उत्कृष्ट नै छ । अन्य कलाकारहरुले पनि आआफ्नो भूमिकामा राम्रो अभिनय गरेका छन् । सबैको एकीकृत प्रयासबाट एक राम्रो गीत निर्माण भएको छ । सबैभन्दा राम्रो पक्ष त गीतले दिन खोजेको सन्देश उत्कृष्ट छ ।
समाजको चेतनास्तर पहिलेभन्दा धेरै माथि उठिरहेको छ । आजभन्दा ६ बर्ष अगाडि अर्थात २०७१ सालको तीजको संघारमा जातीय समानताको यस्तै भाव बोकेको गीत पशुपति शर्मा र देविका केसीको स्वरमा थियो । ‘हामी नेपाली हौं’ बोलको उक्त गीतमा कामी, सार्की, दमाई शब्द लेखिएको भन्दै कतिपय दलित अधिकारकर्मी भनिनेहरुले नै तीब्र विरोध गरेका थिए । कस्तो बिडम्बना ! जसको मुक्तिको यात्रालाई सहयोग पुराउने उद्देश्य बोकेर गीत आएको देखिन्थ्यो, त्यही समुदायभित्रबाटै विरोध ! जनगायक जीवन शर्मा र दलित अधिकारकर्मी आहुतिले भने पशुपति शर्माको उक्त गीतलाई ढृढतापूर्वक समर्थन गर्नुभएको थियो । तर, विरोध यतिसम्म चर्कोरुपमा उठेको थियो कि त्यसबाट तर्सिएर गीतका सर्जक पशुपति शर्माले युट्युबबाट गीत हटाएको घोषणा गर्नुपरेको थियो ।
अहिले हेमन्त कान्छा रसाइलीलाई शायद त्यो समस्याको सामना गर्नुपरेको छैन । ‘हामी नेपाली हौं’मा जस्तै ‘थर बदल्नु पर्दैन’मा पनि जातीय समानताका पक्षमा जोडदार आवाज उठाइएको छ । यस प्रकारका गीतहरुले छुवाछूत र जातीय विभेदविरुद्धको अभियानमा लागेकाहरुलाई प्रेरणा र ऊर्जा थपिरहेका हुन्छन् । यस्ता खालका गीतहरु बढीभन्दा बढी निस्कनु पर्दछ जसले समाजमा सचेतना फैलाउन काफी मद्दत पुराउने छन् । सारङ्गीको मीठो धुनबाट धेरैको मन जित्दै आउनुभएका हेमन्तको यो गीतलाई पनि स्रोतागणबाट अपार माया प्राप्त हुने विश्वास लिन सकिन्छ ।
विभेदरहित समतामूलक समाज निर्माणमा सहयोग पुराउने खालका यस्तै चेतनामूलक सिर्जनाहरुले आगामी दिनमा पनि निरन्तरता पाइरहून् । लोकगायक हेमन्त कान्छा लगायत यो गीत निर्माणमा योगदान पुराउने सम्पूर्ण टिमका सदस्यहरुलाई हार्दिक बधाईसहित गीतको उच्च सफलताको शुभकामना पनि ।
‘थर बदल्नु पर्दैन’ बोलको गीत